Munich yave padyo padiki pakusiya Linux | Linux Vakapindwa muropa
Munich iri padyo padyo nekuchera Linux
Guillermo | | Kugoverwa
Munich raive iro guta rakazvitanga zvese, iyo yakaunza kushingaira kubva kuhurumende dze nyika yemahara software uye kuti yakaratidza kugona kwayo kwechokwadi senzvimbo yekugadzira muzviuru zvemabasa. Asi zvinhu hazvifanire kuenda sezvaitarisirwa panguva iyoyo kumashure mu2004, kana pamwe pane zvimwe zvakasviba kumashure, nekuti kwenguva yakati yanga ichidzungaira la mukana wekudzoka neiyi inonakidza chirongwa zvino vasimuka matsva matsva nezvazvo.
Ndiko kuti kune chikumbiro chakapihwa kuvakuru veguta rechitatu rine vanhu vazhinji kuGerman, izvo zvinoratidza izvo zvingave zvinobatsira kusiya LiMux -iyo distro yakagadzirwa kubva kune iyo sarudzo yekutanga kufamba munzira yakavhurika sosi. Izvi zviri pachena kubva mushumo wakakumbirwa neumwechete Dieter reiter, Meya we Munich, Uyo akakumbira kuti kuedza kuona ramangwana zvose ukama IT muguta rake, uye zviri pachena kune mamwe manzwi anokwidziridzwa mukutsvaga kudzokera kuWindows 10 uye Microsoft Office sepuratifomu yepasi.
Maonero eiyo Dhipatimendi reHuman Resources, iro rinoshoropodza LiMux, richiti kushanda nekugadzirwa kwevashandi munzvimbo iyoyo kwadzikira. zvakanyanya kubva pavakatanga kushandisa iyo distro mu2006. Ivo vanovimbisa kuti kunyangwe mushure memakore gumi ekutanga chirongwa pane kusagutsikana kwakawanda uye kazhinji kazhinji matambudziko ehunyanzvi, uye kuti kunyangwe mushure mekuvandudzwa kwazvino LiMux neLibreOffice vari kumashure kwemimwe mhinduro.
Kune rake divi, Matthias Kirschner, purezidhendi weFree Software Foundation yeEurope, ainetsekana nezve mukana wekusiya chirongwa ichi, uye akavimbisa kuti pane kumwe kuzvipira mumushumo zvinoratidza kudzoka kuWindows. Kutanga nenyaya yekuti yakaitwa nerutsigiro rweAccenture, chinongedzo chinobata neMicrosoft mune chishandiso chinonzi Avanade nerubatsiro rwunopihwa kumakambani ari kutsvaga kushandisa Windows-based mhinduro. Asi kupfuura izvi, ku Kirschner akasiya LiMux, mushure memakore gumi nemaviri akabudirira uye aendesa mabasa anodarika zviuru gumi nezvishanu, zvaizongoreva kuti Munich iri mubishi reMicrosoft, chimwe chinhu chingave chiitiko chinotyisa kune dzimwe hurumende.
Izvo zvichave zvakakosha kuti uone ipapo, mune iyi nyonganiso yese inoramba iripo kunyangwe paine mazwi anopesana neLinux chokwadi ndechekuti mushure menguva yakareba zvakadaro midzi yatove yakasimba uye inofungidzirwa kuti kuchave nekushora kushanduka. Izvi pasina kuregeredza chokwadi chekuti guta reMunich chikamu che The Document Foundation uye ndeimwe ye pakukura vanopa mahara software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Munich iri padyo padyo nekuchera Linux
Vatongi vatsva vanotengwa neMMS, asi havatye uye ndosaka vachifamba nhanho nhanho, vachitaura manyepo nezve kugadzirwa nezvimwe. Nehurombo, hapana mapato ezvematongerwo enyika anorwira chaizvo achitsigira vakasununguka nekuti hazvibatsire kwavari kungave kwehupfumi kana nezvematongerwo enyika.
Nekuti kunyunyuta kuri nyore kwekushandisa zvisirizvo kana uchishandisa zvigadzirwa zvakabhadharwa, zviripo zvemahara zvakaenzana zvinoshandura ese maAA PP pasi rese kuenda kuGNU / Linux zvingangoitika. Uye kana iwe uchiba kubva kuruzhinji, unoba zvakanyanya nekupa kugadziriswa kweGNU / Linux kukambani yemukoma pane makomisheni ayo MS anogona kukupa iwe, asi avo vanozvipira kune zvematongerwo enyika vakapusa zvekuti havatozviziva .
Vinsu Karma akadaro
Izvo zvaive zvichitarisirwa, ivo vanokwezva kana vaine chimwe chinhu chasara imari yekutenga vanhu, ngatitarisirei kuti kudzoka kumahwindo hakuitike, kungave kurova kukuru kune gnu-linux
Pindura Vinsu Karma
Qty Leopo akadaro
Kudzoka kumashure kungave kunonyadzisa, chandisinganzwisise ndechekuti havana kurairwa uye kuchengetedzwa neimwe kambani hombe yeLinux yeprojekti, RedHat, Canonical, Suse uye nekudaro vanofanirwa kuzvidzivirira, kuwedzera kutsigira.
Pindura Cant Leopo
Izvo zvandisinganzwisise ndiko kudiwa kwekuita distro muguta rega rega Haugone Suse, Redhat kana Debian kuchinjika? zvakafanana kana iwe ukaisa debian mukuwedzera kune epamutemo marekodhi, iyo isiri yemahara, iyo mozilla backports, iyo multimedia, iyo chrome repository kungoitika uye imwe yekuwedzera repository ine chaiwo mapurogiramu eiyo manejimendi angave ari nyore pane imwe distro repository yekuwedzera iyo imwechete yaive nemapakeji mana kana mashanu.
Kusimbisa, ini ndoda kufunga kuti vaive vasina kupusa uye vakaferefetwa kare
TrueOS mutsivi wePC-BSD
5 yakakosha mirairo muLinux